ဗေဒင် Archives - YATHAZONE
၇ လပိုငျးအတှကျ ခုပွောပွပေးထားတဲ့ ယတွာလေးကို သသေခြောခြာလိုကျလုပျကွပါ လုပျငနျးစီးပှား၊ ငှကွေေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အခကျအခဲ ငှကွေေးကံအညံ့ လာဘျမရှငျမှု ငှကွေေး လာဘျတိတျမှုတို့ကို သိသိသာသာ သကျသာစပေီး ငှကွေေး အခကျအခဲမြား ပွလေညျခွငျး ငှကွေေး ကံကောငျးခွငျး လာဘျလာဘပေါမြားခွငျး လာဘျပှငျ့ခွငျး အကြိုးအားကောငျးစပေါလိမျ့မယျ။ ယတွာအတှကျလိုအပျတာက လိမ်မျောသီး ၃ လုံး (လိ ၄ မ်မျော ၅) လဘ်ခကျရညျကွမျး တဈခှကျ (လ ၄ ဘ်ခကျ ၅) လိမ်မျောသီး ၃ လုံးကို လငျဗနျး (လငျ ၄ ဗနျး ၅) တဈဗနျး ထဲထညျ့ပီး မိမိနအေိမျ ဘုရားကြောငျးဆောငျမှာ ကပျလှူပေးပါ… လငျဗနျးက …
ဒါကို သတိတရနဲ့စနေနေ့တိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးလျှင် အကြွေးမြန်မြန်ကြေ၍ငွေဝင်လာဘ်ပွင့်စေသည်…
ဒါကို သတိတရနဲ့စနေနေ့တိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးလျှင် အကြွေးမြန်မြန်ကြေ၍ငွေဝင်လာဘ်ပွင့်စေသည်… စနေနေ့တိုင်းလုပ်လျှင် အကြွေးကြေ ငွေဝင်လာဘ်ပွင့်စေပါတယ်။ (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) ရက်တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် စနေနေ့ ကျရောက်သည့် နေ့တွင် ခြေသည်းလက်သည်းညှပ်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ခေါင်းလျှော် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်၍ ရေချိုးကာသန့်စင်ခြင်း …၊ အိမ်အတွင်းရှိအမှိုက်သရိုက်များ သန့်ရှင်းစွန့်ပစ်လိုက်ခြင်း၊ အိမ်ထမင်းစားခန်း သီးသန့်ရှိလျှင် ထိုအခန်းအတွင်းကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ မိသားစုပျော်ရွှင်ရယ်မောစေသည့် ဓါတ်ပုံများ၊ ကျက်သရေရှိပြီး လှပသောပန်းပုံများကို တပ်ဆင်ထားလျှင် အင်မတန် စီးပွားတက် လာဘ်ရွှင်စေပါတယ် …။ ပိုက်ဆံ 1000ဖြစ်စေ 10000ဖြစ်စေ ပံသကူပစ်လှူခြင်း၊ သံဃာတော်ဘုန်းကြီး သူတော်စင်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို မိမိတတ်စွမ်းနိုင်သရွေ့ ပုတီးများ လှူဒါန်းပေးရခြင်း၊ …
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်ဟောကိန်း – (ဆရာ လင်းညို့တာရာ)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်ဟောကိန်း – (ဆရာ လင်းညို့တာရာ) မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေးကြတယ် ကျွန်တော်ကလည်း ဟောကိန်းတွေ ဟောချက်တွေ ဘာမှမပြောချင်တာနဲ့ ငြိမ်နေခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်သူများက သိချင်တယ် တစ်ကဲကဲ မို့ ဟောကိန်းအချို့ ထုတ်ပြပါရစေ …. ၁. ကိုဗစ်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနည်းဆုံး လူတစ်သောင်းဝန်းကျင်လောက် ကူးစက်သွားပါလိမ့်အုန်းမည်။ ၂. ပိတ်ပင်ထားသော မြို့များတွင်လည်း ထပ်မံတွေ့ ရှိရတတ်ပြီး စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တတ်ပါလိမ့်မည်။ ၃. ပွဲလမ်းသဘင်များ အားလုံးပိတ်ပင်ခံရပြီး ကိုဗစ်ရောဂါအပြင် အခြားစိတ်ရောဂါများကြောင့် ၂၀၂၁ အတွင်း စိတ်ကျသူများ ၊ သတ်သေသူများ ၊ အကြွေးမြီးများဖြင့် ဒုက္ခရောက်သူများ ပေါများလာတတ်သည်။ ၄. ကိုဗစ်အခြေအနေသည် ၁၁ …
မမှန်ရင် လျှာအဖြတ်ခံရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ (2021) မှာဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာ ဗေဒင် ဟောစာတမ်းများ
မမှန်ရင် လျှာအဖြတ်ခံရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ (2021) မှာဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာ ဗေဒင် ဟောစာတမ်းများ (1) ဇန်နဝါရီ။ ဇန်နဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေကတော့ ထူးထူးခြားခြား တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဟာ(၁) လပိုင်းအတွင်း ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လမ်းလျှောက်ရင် ဘယ်တစ်လှမ်း၊ ညာတစ်လှမ်း လျှောက်ကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး ရေများများသောက်ရင် သေးများများ ပေါက်တတ်တာကိုတော့ သတိထားပေးပါ …။ (2) ဖေဖော်ဝါရီ။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ အသက်တွေ ကြီးကြီးလာတတ်ပြီး ၂၀၂၁ အ တွင်းမှာတော့ထမင်းစားပြီးတိုင်း ဗိုက်မဆာတတ်ကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆောရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကတော့ ကားလမ်းကူးရင် ဘယ်ကြည့်၊ညာကြည့်၊ ဘယ်ပြန်ကြည့်၊ ညာပြန်ကြည့် ပြီးရင်ကူးဆိုတဲ့ ယတြာလေးကို ပြုလုပ် ပေးနိုင်ပါတယ် …
2021ခုနှစ် သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃-ခုနှစ်၊ မန္တလေး မဟာသင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး ၁၃၈၃-ခုနှစ်၊သင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး ဇေယျတု မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၃ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(14)ရက်(၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက် ၅နာရီ၄၆မိနစ်၅၅စက္ကန်.အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန်ကျပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(၄)ရက်၊ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီလ(15)ရက်( ကြာသပတေးနေ့)သည်မဟာသင်္ကြန် (အကြတ်ရက်)ဖြစ်သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၅ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(16)ရက်၊​(သောကြာနေ့)နံနက် ၉နာရီ၅၁မိနစ်၃၆စက္ကန့်တွင်မဟာသင်္ကြန်တက်ပါသည်။ ထိုကြောင်မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်းခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်း(၆)ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီးလ(17) ရက်၊စနေနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ဖြစ်၊ကောဇာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃-ခုနှစ် လက်ထက်ရက်မရှိ၍ …. ဗုဒ္ဓဘာသာ၊သာသနာတော် ဝန်ထမ်း ရဟန်းအရှင်မြတ်တို့မှာ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဝါဆိုလပြည်ကျော်(၁)ရက်၊ ခရစ်နှစ်(2021)၊ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်၊စနေနေ့တွင် ပထမပုရိမဝါ ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်။ ဒုတိယပစ္ဆိမဝါကို ဝါခေါင်လပြည်ကျော်(၁)ရက်၊သြဂုတ်လ(၂၃)ရက်တနလာင်္နေ့တွင် ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်။ (ကန်ဦးမူသင်္ကြန်စကားပြေကျမ်း) ကောဇာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်အတွက် အရှင်သခင်ဂြိုဟ်ဖွဲ့ ဝဿပတိဧကရာဇ် -တနလာင်္ဂြိဟ် သေနာပတိ ကာကွယ်ရေး – ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် သဿပတိ စိုက်ပျိုးရေး-စနေဂြိုဟ် ရဿပတိ ကုန်သွယ်ရေး …
2021ခုနွစ် (3)လပိုင်းအတြက္တစ္လစာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း(ကြာသပတေး၊သောကြာ၊စနေ)
2021ခုနွစ် (3)လပိုင်းအတြက္တစ္လစာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း(ကြာသပတေး၊သောကြာ၊စနေ) 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော် ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ (1)လစာဟောစာတမ်း ငွေကုန်ကြေးကျ များမည်။မိမိလုပ်ငန်းလုပ်တွင် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနှင့်တွေ့ကြုံရပြီး စကားအချေအတင်ပြောဆိုမှုများ အမှုကိစ္စများပေါ်ပေါက်တတ်၍ သတိနှင့်နေသွားရန်လို့အပ်ပါသည်။လူလိမ်ခံရတတ်သည်။မိတ်ဆွေကောင်းနှင့်စိတ်ဝမ်းကွဲမည်။ မိဘဆွေမျိုးတို့နှင့်ပြသာနာဖြစ်တတ်သည်။ချစ်မှုရေးရာတွင် စန်းပွင့်မည်။ပညာရေးတွင် စိတ်အပူပင်ကျနေမည်။ငွေဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရေးတွင် နှောက်ယှက်မှုများကြုံတွေ့ပြီး စိတ်သောကရောက်၍ အခက်ခဲများကျရောက်နေတတ်မည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လယ်ယာဥယျာဉ်ခြံထွက်ပစ္စည်းနှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း အထူးအကျိုးပေးမည်။ကျန်းမာရေးညံ့တတ်သည်။အထူးသဖြင့် အစာအိမ်နှင့်လေနာရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။ တစ်လတာယတြာ။မိမိမွေးနေ့တွင်မေမြို့ပန်း(၁၉)ခက်ကိုဘုရားမှာလှူပေးပါ။သံဃာတော်အားဘယာကြော်(၁၉)ခုကပ်လှူပေးပါ။သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like and Shareပေးကြပါ….။ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber) သောကြာသာသမီးများအတွက် 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ (1)လစာဟောစာတမ် လုပ်ငန်းသစ်များ တိုးချဲ့လျှင် အောင်မြင်မှုကြုံမည်။စီးပွားလာဘ်လာဘ ကောင်းမည်။ပညာရေး ကောင်းမည်။ချစ်မှုရေးရာကိစ္စတွင် စန်းပွင့်မည်။နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးထွက်ရခြင်း(သို့)ဘုရားဖူး ခရီးထွက်ရခြင်း …
2021ခုနွစ် (3)လပိုင်းအတြက္တစ္လစာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း(တနင်္ဂနွေ၊တနင်္လာ၊အင်္ဂါ၊ဗုဒ္ဓဟူး)
2021ခုနွစ် (3)လပိုင်းအတြက္တစ္လစာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း(တနင်္ဂနွေ၊တနင်္လာ၊အင်္ဂါ၊ဗုဒ္ဓဟူး) 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ (1)လစာဟောစာတမ်း သူတစ်ပါးငွေများ ကိုင်ခြင်း အာမခံခြင်းများ မလုပ်ပါနှင့်ပြသာနာ တက်ရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရေးတွင် အထူးကံကောင်းကျိုးပြုလာမည်။အချစ်ရေး၌ စန်းပွင့်ပြီး လူငယ်လူရွှယ်များအနေဖြင့် နှလုံးသားရေးရာများတွင် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကြောင့်စိတ်မောရတတ်သည်။ ပညာရေး၌ ရှေ့ပိုင်းကာလတွင် မရောင်မလည်ဖြစ်နေတတ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှအဆင်ပြေ အောင်မြင်နိုင်ကိန်းရှိသည်။ကျန်းမာရေးမှာ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိတတ်မည်။လူမှုရေး၌ အထူးလူချစ်လူခင်ပေါ်များမည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်စေကာမူ တပည့်လက်သားအလုပ်သမားတို့နှင့် အဆင်ပြေ တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်၏။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ဆုံးရှုံးထားသောငွေများ ပြန်လည်အဆင်ပြေလာမည်။ကား၊ကျောက်၊များအရောင်းဝယ်ကံကောင်းမည်။ ယတြာ။ ။မိမိမွေးနေ့တွင် ဇော်စိမ်း(၉)ခက်(သို့မဟုတ်) ဇွန်(၉)ညွန့်ဘုရားမှာလှူပေးပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like and Shareပေးကြပါ….။ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656 (viber) တနင်္လာသားသမီးများအတွက် …
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်မယ်
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်မယ် မန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာမှအိမ်ထောင်ရေး အဟောများ အကုန်မမှန်ပါ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀% ဖြစ်ကြရတတ်တယ်လို့ ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ် တွက်နည်း” မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို ၇ ဖြင့် စား၍ အကြွင်း ၁ ရသော ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပါက အကြွင်း ၁(ကျား)ဆိုသော အဟော မိန်းကလေးဆိုပါက အကြွင်း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အဟောကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကြွင်း ၁ (ကျား) အကြွင်း ၁ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများသည်။ များသာအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲ ကျတတ်ကြပါတယ်။ မိမိဘက်က အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်ကို သည်းခံ၍ ပေါင်းသင်းပေမယ့် အိမ်ထောက်ဘက်က မိမိအပေါ်ကို …
ရွှေငွေ လာဘ်ဝင်စေသော လိုတရ ယတြာအစီအရင်
ရွှေငွေ လာဘ်ဝင်စေသော လိုတရ ယတြာအစီအရင် လိုတရစိန်ရွှေငွေ လာဘ်ဝင်စေသော ယတြာအစီအရင် စိန်ရွှေငွေအိမ် ရချင်ပါသလား လာဘ်ပိတ်နေပါသလာ အခက် အခဲတွေ ကျော်လွှားချင်ပါသလား အောက်ပါ ယတြာကို လုပ်ကြည့်ပါ (ယုံကြည်သူများအတွက်သာ) ပုံမှာ ပြထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ပါ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ လင်ဗန်း (၂) ချပ်။ ဆန် ။ရွှေ ။ငွေ (သို့) ငွေစက္ကူ။ အုန်းရည် ။နှင်းဆီပန်း (၅) ပွင့်။ ဖန်ခွက်(၁)လုံး ။ဖယောင်းတိုင် (၁) တိုင် ။ လင်ဗန်းတစ်ချပ်မှာ ဆန်ထည့်ပါ ဖန်ခွက်ထဲမှာ . အုန်းရည်ထည့်ပါ အုန်းရေထဲမှာရွှေ ငွေထည့်ပါအုန်းရည်ထဲရွှေငွေစိမ်ပြီးလျှင် ရွှေငွေကို ဆယ်ယူထားနိုင်ပါသည် အုန်းရည်ထည့်ထားသည့် ဖန်ခွက်ကိုဆန်လင်ဗန်းပေါ် …
ငွေကြေးလာဘ်ရွင်အောင် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ
ငွေကြေးလာဘ်ရွင်အောင် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် အတွင်း စာရွက် အဖြူ တစ်ရွက်ပေါ်မှာ “န” အက္ခရာ ရေးသားပါ။ပြီးလျှင် “န” အက္ခကို ပတ်၍ “ဝလုံး” ရေးသားပါ။ ထို “န” အက္ခရာ ရေးသားထားသည့် စာရွက်ပေါ်မှာ ဝါးခြမ်းပြား တင်၍ ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်းပြီး မြတ်စွာ ဘုရားအား လှူဒါန်း ပူဇော်ပါ။ နမော ဗုဒ္ဓါနံ နမော ဓမ္မာနံ နမော သံဃာနံ နမော မာတာ ပိတုနံ နမော အာစရိယာနံ သြောင် သဗ္ဗသိဒ္ဓိ ဘဝန္တုမေ ဇယမင်္ဂလံ မီးထွန်း …
Total Users : 253529
Total views : 688145